नुहाईसकेपछी हात यस्तो चाउरी पर्ने गर्छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला,यस्तो हुँदै छ हजुरको शरीर – NepalajaMedia
March 5, 2021 510
होसियार रहाैँ ! पानी चलाउदा वा नुहाईसकेपछी हात खुट्टाका छाला यसरी चाउरी पर्ने समस्या छ भने एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला । नुहाएपछि हाम्रो श`रिरको केही हिस्साको छा`ला खुम्चिने गर्दछ ।हात, हत्केला, औलाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिएझै हुन्छ। आ`खिर यसको कारण के हो त ? केही व्यक्ति बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताउँछन् । पा`नीमा रहँदा हाम्रो छा`लाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन् जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ ।होसियार रहाैँ ! पानी चलाउदा वा नुहाईसकेपछी हात खुट्टाका छाला यसरी चाउरी पर्ने समस्या छ भने एकचोटी अवस्य पढ्नुहोला
तर वैज्ञानिक भन्छन्, यो केवल ओस्मोसिस मात्र होइन । वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् कि छालाको जुन हिस्सा चाउरी परेको छ, यदि त्यहाँको केही न`सा काटिदिने हो भने त्यसरी चाउरी पर्दैन । यसको मतलब चाउरी परेको छाला यो देखाउछ कि हाम्रो स्नायु प्रणाली बिल्कुल ठि`क काम गरिरहेको छ ।।
अमेरिकी वैज्ञानिक मार्क चान्गिजी भन्छन् कि हाम्रो शरिर बदलियको वा`तावरण अनुसार आफुलाई पनि परिवर्तन गर्दछ। पानीमा छाला चाउरी पर्नु पनि त्यहि हो, कि हामी चीजहरुलाई ठिक ढंगले समाउन सकौं। सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धानको क्रममा यस्तो वि`शेषता बाँदरमा पनि भेटेका थियो ।।
Prevनुहाउनसाथ भुलेरपनि नगर्नुस् यी पाँच गल्ती,नत्र बाकीँ रहन्न कपाल
Nextअन्ततः सियोना श्रेष्ठ को उपचार सफल भयो अब नेपाल आउने तयारीमा मा Siyona Shrestha (स्वास्थ्य लाभको कामना गरि सहयोग गर्नुहोला)